Ogaden News Agency (ONA) – OYSU/KA oo ka qaybgalay xuska Maalinta Qaxootiga Aduunka ee Koonfur Afrika
OYSU/KA oo ka qaybgalay xuska Maalinta Qaxootiga Aduunka ee Koonfur Afrika
Waxaa maanta lagu qabtay magaalada Port Elizabeth ee Xarunta gobolka Eastern Cape munaasabad balaadhan oo lagu xusaayay maalinta Qoxootiga Aduunka loo aqoonsaday ee ku aadan 20-Bisha June (world Refugee Day).
Munaasabadan ayaa waxaa si weyn u soo qaban qaabisay Hay’da Xoqootiga u qaabilsan Aduunka ee la yidhaahdo The UN Refugee Agency ( UNHCR ) Hay’da ayaa martiqaad u soo gudbisay mudo dhawr Todobaad Ka hor Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya ( OYSU ) ee wadanka Koonfur Africa gaar ahaan magaalada Port Elizabeth (PE).
Iyadoo Xuska maalinta Qaxootida Aduunka meelo badan oo Caalmaka ah laga xuso Sanad walba ayaa waxaa Hall-kii ay munaasabadu Ka dhacday soo buux dhaafiyay Qoomiyado Farabadan oo Kala Jaad Jaad ah isla markaana wadamaday u dhasheen uga soo qaxay Colaado iyo Dhibaatooyin kale waxaana ka mid ahaa wadamadaas , Ogadeniya, Somaliya, Eritrea, Ethiopia, Congo, Burundi, Zimbawi, Ghana iyo wadamo kale oo Africaan ah.
Munaasabadan ayaa lagu muujiyay dhibaatoo-yinka la soo darsa Dadka Qaxootiga ah ee Caalamka gaar ahaan wadanka Kuunfur Africa oo marar badan ka dhacaan rabshado lagu wax yeeleeyo Qoxootiga Soomaliyeed ee Jooga wadanka Koonfur Africa iyo Qoomiyadaha kalaba.
Xuska munaasibadan ayaa lagu soo bandhigay Ciyaaraha Hidaha iyo dhaqanka , Cuntooyin,iyo Calaamaddo muujinaayay Qoomiyad walba dhaqankeeda Hadaba waxaa indhaha Dadweynihii goobta isugu yimid soo jiitay Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya (OYSU) oo Soo bandhigay Ciyaarihii Hidaha iyo dhaqanka Somalida Ogadeniya isla markaana soo Jiitay Saxaafadii munaasabada Timid iyo Dadweynihiiba waxaana goobta qoraalo/war qaddo ka qaybiyay masuuliyiin Ka socday Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africa isla mar ahaantaana khudbado ku saabsanaa Qoxootiga Ogadeniya iyo Colaada ka taagan Ogadeniya ka soo jeediyay.
Ugu dambayntii waxaa munaasabaha ka hadlay madaxa Hay’ada UNHRC ( The UN Refugee Agency ) u jooga magaalada Port Elizabeth oo lagu magacaabo Mr Haramze wuxuuna sheegay in dhibaatooyinka Dadka Qoxootiga ah si deg –deg ah wax looga qaban doono.
Halkan ka daawo Sawiradii laga soo duubay:
Port Elizabeth /South Africa.